हराउंदै मगर सस्कृती – मगर जातीको पहिचान झल्काउने लोकप्रिय मारुनी नाच ! | Magar Media | मगर सन्चार
४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७ March 17, 2016
मगर जातीमा प्रचलित नाच हो मारुनी नाच । तर हिजो आज मारुनी नाच लोप हुदैछ । त्यसैले मगर जातीको पहिचान झल्काउने लोकप्रिय मारुनी नाच बचाऔ अभियानमा जुटेका छन् बहादुरपुर गाविसमा स्थानीय बासिन्दाहरु । पुर्खौ देखि प्रचलनमा रहेको मारुनी नाच पछिल्लो समयमा हराउदै गएपछि संरक्षण र प्रबद्धनमा जुटेको स्थानियको भनाई छ । विवाह, पुजा, चाड पर्वमा तिथि, मिति मिलाएर मारुनी नाच्छन् । जन्म , नौरान, भात खुलाईका दिनमा समेत खुसियाली मनाउन यहाका मगर हरु मारुनी नाच्ने गरेका छन् । युवाहरु साडी, पोते, फरिया, पटुकी, पाउजुमा सिगारपटार गरि नाच्ने गर्दछन् । दशैको पूर्णिमा, तिहार, हरिबोधनी, एकादशी, मंसिर पूर्णिमा, पुजा लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा मारुनी नाच नाच्ने गरेको मारुनी नाचका रौरा धन बहादुर झेडीको भनाई छ । अर्का रौरा मान बहादुर रानाले मगर संस्कृतिमा आधारित मारुनी बचाउन युवाहरुको साथ लिएको बताउनु भयो । स्थानीय दिल बहादुर ढेङ्गाले मारुनी नाच झन्जटिलो र खर्चिलो भएपनि मगरी पहिचान हराउन दिनु हुदैन भन्दै संरक्षणमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।
पस्तुत छ, पुर्बी पाल्पाको बहादुर गाबिस बासीहरुले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको यो मारुनी नाच……
मगर मिडिया डट कमको मगरात बहसमा मगर संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष घर्तीमगर र पुर्ब सभासद सोमैमगर !
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय मगर बौद्ध सम्मेलनको तयारी, उपराष्ट्रपति पासाङले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने !
सुमन थापा मगरको अर्को सुपरहिट तीज गीत “मादलु घनन” बजारमा !
१५ असार २०७४, बिहीबार ०१:१२ admin 0
१३ माघ २०७४, शनिबार २१:१० admin 0
आदर्श तारा स्मृती कप आयोजकको कब्जामा, पाहुना टोली काहुँ मिलन झापुटार २–० ले पराजित ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
मिनाम लाङ्घाली क्लवद्वारा खुला नकआउट फुटवल आयोजना, स्थानीय लाहुरे टिम बिजयी ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
अब घर घरमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाही पत्र ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
विजनेस एण्ड प्रोफेशनल वुमेन सुनाकोठी शाखाको अध्यक्षमा प्रतिमाया पुन चयन ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
दमौलीमा मातृभाषामा साहित्यीक प्रतियोगिता सम्पन्न साथै मगर लेखक संघ तनहुँको अध्यक्षमा बिनु थापा मगर ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
सम्पर्क समन्वय केन्द्रिय समितिको अध्यक्षमा होमराज खपाङ्गी मगर चयन ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
काठमाण्डौँको तिनकुनेमा ल्होछार कार्यक्रम सम्पन्न ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
१९ औं अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसमा तनहुँको भिमादमा बहुभाषिक साहित्यिक प्रतियोगिता सम्पन्न! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा स्याङ्जामा मगर भाषा कविता प्रतियोगिता ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७
मादी गाउँपालिकाको थाकमा सञ्चालित मगर भाषा कक्षाको समापन ! ४ चैत्र २०७२, बिहीबार ०६:१७